Ciyaartii Sool v Sanaag oo 2 – 2 ku dhaamaatay & Sanaag oo rigoore ku soo baxday. – Radio Daljir
Garowe, Feb 07 – Ciyaar aad u adag ayaa dhex martay xulalka Sool & Sanaag ee u tartamayey u gudubka wejiga semifaynalka ee ciyaaraha gobollada Puntland ee sannadka 2012.
Ciyaarta oo markii hore la isku mari waayey ayaa labada dhinacba ay dhaliyeen min 2 gool, waxaa deetana la isula gudbay waqti dheeraad ah oo iyana aan wax goolal ah la kala dhalin; ciyaarta ayaa 120 daqiiqo kadib la dhigay rigoore min 5 gool dhalineed ah kooxdiiba.
Xulka gobolka Sanaag ayaa dhaliyey 5 gool halka xulka Sool ay dhaliyeen 4, halna ay seegeen; sidaasna ay guushu ku raacday xulka gobolka Sanaag.
Waa sannaadkii ugu horaysay ee xulka Sanaag ay u soo baxeen wejiga semifaynalka ee tartanka ciyaaraha gobollada Puntland.
Xulka Sool oo laba sano ka hor qaaday koobka tartanka ciyaaraha gobollada ayaa markii laga badiyey ciyaarta muujiyey cadho iyo ciyaar xumo ay kula kaceen garsooraha ciyaarta.
Gobollada Mudug, Karkaar, Nugaal, iyo Sanaag ayaa ku hardami doona semifaynalka iyada oo 2-da xul ee badiyaa ay isugu soo hari doonaana finaalaha tartanka ciyaaraha gobollada Puntland ee 2012.